गायिका इन्दिरा जोशीसँग इंगेज्मेन्ट गर्ने केडिया को हुन् ? – Sodhpatra
गायिका इन्दिरा जोशीसँग इंगेज्मेन्ट गर्ने केडिया को हुन् ?
प्रकाशित : ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार २१:१८ September 24, 2021
काठमाडौं : गायिका इन्दिरा जोशीले फेसन डिजाइनर शरद केडियासँग इंगेज्मेन्ट गरेकी छन् । उनीहरु हेलिकोप्टरमा खुम्बु पुगेर औंठी साटासाट गरेका हुन् ।
उनीहरुबीच पछिल्लो दुई वर्षयता प्रेममा रहेको बताइन्छ । इन्दिराले शरदले आफूसँग बिहे प्रस्ताव राखेको र आफूले ओके भनेको आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा पोस्ट गरेकी छन् । उनले शरदले आफूलाई औंठी लगाइदिएको विभिन्न तस्बिरहरूसमेत पोस्ट गरेकी छिन् ।
विशेष गरी आइटम गीतका कारण चर्चामा छाउने गरेकी इन्दिरा पछिल्लो समय नेपाल आइडलकी एक निर्णायकका रूपमा समेत रहँदै आएकी थिइन् । शरद भने फेसन डिजाइनका कारण नेपाली महिला सेलिब्रेटीमाझ परिचित छन् । शरद र इन्दिराले बिहे चाहिँ कहिले गर्छन् भन्ने खुलाइएकाे छैन ।